खाेटाङमा लकडाउनले पोल्ट्री व्यवसाय मारमा
कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को सम्भावित जोखिम हुन नदिन ‘लकडाउन’ भएपछि पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको छ ।
बिर्तामोड नपाको राहत कोषमा नौ लाख ७६ हजार सहयोग
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन राहत कोषमा यहाँका विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाले सहयोग गरेका छन् ।
प्रदेश १ को जनसुरक्षा कोषमा ५० लाख सहयोग गर्ने सहाराको घोषणा
प्रदेश १ को सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार जनसुरक्षा कोषमा सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रु ५० लाख जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
उदयपुरकाे त्रियुगा नगरपालिकमा काेराेनाविरुद्ध एक कराेडकाे काेष स्थापना
कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को सम्भावित जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न त्रियुगा नगरपालिकाले रुपैया एक करोडको कोष स्थापना गरेको छ ।
कोरोना भाइरस, (कोभिड –१९) को सम्भावित जोखिम कम गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि पाँचथरका विभिन्न आयोजनामा अलपत्र परेका मजदुरलाई उद्धार गरिएको छ ।
कोभिड –१९ को आशङ्कामा सुनसरीमा ३९ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
विराटनगरमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले कोरोना भइरस (कोभिड १९) विरुद्ध लडन पूर्ण तयारी गरेको बताएका छन् । शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको कारोना विशेष अस्पतालको निरीक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकार कोरोनाविरुद्ध लड्न प्रदेशका सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको बताए ।
धनकुटा नगरपालिकाका एक हजार ४६६ परिवारलाई राहत वितरण
धनकुटा नगरपालिकाले अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्दै आइरहेका एक हजार ४६६ घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको हो ।
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाद्वारा १२ हजार विपन्न व्यक्तिलाई राहत वितरण
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाकाले १२ हजार विपन्न व्यक्तिलाई राहत वितरण गरेको छ ।
लकडाउनको अवज्ञा गर्ने एक हजार २४७ सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
फिदिम वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष तुम्बापोको निधन
फिदिम नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष लीलाराज तुम्बापोको निधन भएको छ ।
विराटनगरका विभिन्न सङ्घसंस्थाले ‘लकडाउन’का कारण दैनिक हातमुख जोर्ने समस्या भएका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई खाद्य सामग्री वितरण गरिएको हो ।
खाद्यान्न अभाव हुन दिन उत्पादन सुरु
झापामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन मेचीनगर–११ मा रहेको सूर्य एग्रो प्रालिले उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण अलपत्र परेका जिल्लाका विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने मजदूरको उद्धार गरिएको छ ।
प्रदेश १ मा कोभिड १९ को आशङ्कामा बिहीबारसम्म ५९ जनाको स्वाब टेष्ट गरिएकामा ४२ को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
लकडाउनले सोलुखुम्बूमा निर्माणाधीन हाइड्रो पावरको काम ठप्प
लकडाउनले सोलुखुम्बूमा निर्माणाधीन आधा दर्जनभन्दा बढी हाइड्रोपावरको ठप्प भएको छ । लकडाउले निर्माणाधीन हाइड्रोपावरको काम प्रभावित भएको हो जानकारी दिइएकाे छ ।
लकडाउनले मुलुक ठप्प भएका बेला सुत्केरी हुन नसकी प्रश्रव पीडामा रहेकी सोलुखुम्बुकी एक महिलाको हवाई उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएको छ ।
क्वारेन्टाइनमा राखिएको ९ दिन वितिसक्दा पनि एक युवकको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन ।
विदेशबाट फर्किएका १३३ मध्ये चार जना क्वारेन्टाइनमा र दुई जना आइसोलेशनमा बसेका छन् । बाँकी १२७ जना आफ्नो घरमा नै बसिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड —१९) को सम्भावित जोखिम हुन नदिन भएको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने मजदूरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
रगतको चरम अभाव भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाले स्वेच्छिक रक्तदानका लागि आह्वान गरेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेपछि रक्तदानसमेत ठप्प भएको छ ।
ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा १२ कामदार अलपत्र
ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारमा १२ मजदुर अलपत्र परेका छन् । स्थानीय तौलीकुलो सिँचाइ आयोजना चार्खुमा काम गर्न आएका सुर्खेतका ६ र इलामका ६ कामदार अलपत्र परेका हुन् ।
सुनसरीको दुहबी नगरपालिका ९ मा रहेको जयबाबा इँटा उद्योग र गढी गाउँपालिका १ मा रहेको आनन्द इंँटा उद्योगले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको छ ।
मेची अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका दुईजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ
भद्रपुरस्थित मेची अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका तीनजनामध्ये दुईजनाको कोरोना नमुना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । भद्रपुर नगरपालिका–३ का बाबु–छोरोको थ्रोट स्वाब रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पीताम्बर ठाकुरले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ को कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १२ करोड जम्मा
प्रदेश नम्बर १ ले कोरोना रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचारका लागि स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा बुधबारसम्ममा करिब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
सङ्खुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका–२ बाह्रेबीसेबाट पाँच विदेशी पर्यटकको बुधबार अपराह्न उद्धार गरिएको छ ।
लकडाउन प्रभावकारी बनाउन नेकपा पाँचथरको अपिल
इनरुवामा एम्बुलेन्सले स्कुटीलाई ठक्करबाट एक महिलाको निधन भएको छ ।
अरुण तेस्रोद्वारा खाँदबारी अस्पताललाई साढे एक करोडको उपकरण प्रदान
निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले जिल्ला अस्पताल खाँदबारीलाई साढे एक करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश १ मा ४६ को नमूना सङ्कलन, ३० को नेगेटिभ
प्रदेश १ मा मङ्गलबारसम्म कोभिड–१९ को आशङ्कामा ४६ जनाको थ्रोट स्वाब नमूना सङ्कलन गरिएको छ । दश महिलासहित ४६ को स्वाब नमूना सङ्कलन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सुरेश मेहताले जानकारी दिए ।
दार्जिलिङमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकी यात्रुसँगै आउने दुई यात्रु धरानमा !
भारतको दार्जिलिङमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकासँगै एउटै फ्लाईटमा आएका दुई यात्रु धरानका पनि रहेको खुलेको छ ।
कोभिड–१९ परीक्षणका लागि स्वाब पठाइएका दुई व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण नभएको रिपोर्ट आएको छ । धरान पठाइएका अरु तीन वटा नमूनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
कोराना संक्रमणका शंका गरिएका व्यक्तिको सबै मिलेर पहिचान गरौं : मुख्यमन्त्री राई
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका नागरिकको पहिचानमा जुट्न प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
भक्तपुरबाट झापा फर्किएका ७१ मजदुरलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन
भक्तपुरस्थित विभिन्न इँटा भट्टाहरुबाट झापा घर फर्किएका ७१ जना मजदुरलाई होम क्वारेन्टाइन बस्न निर्देशन दिइएको छ । कोरोना भाइरसको त्रासपछि भक्तपुरको नयाँ ठिमी र दक्षिण बारही इँटा उद्योगमा काम गर्दै आएको मजदुरहरु झापाको भद्रपुरस्थित घर फर्केका हुन् ।